Ngathi | Tianjin Yixin Pipe Izixhobo Co., Ltd.
Tianjin YIXINyasekwa ngo-2010 ikakhulu benza R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwemibhobho zonke-indawo izixhobo welding oluzenzekelayo, kwaye inika imibhobho ukuwelda iinkqubo isikhokelo zobugcisa ukunceda abathengi ukusombulula iingxaki zobugcisa. Siyabambelela kumxholo "wemveliso yenkxaso yezobuchwephesha eqinileyo, umgangatho ophezulu wokwandisa imarike, inkonzo yokunyaniseka yokunyusa uphawu lwethu" inyanzelisa ukugxila kubathengi kunye nokukhokela kwintengiso, ngeemveliso ezinokuthenjwa nezisebenza kakuhle, inkonzo enoxanduva lwasemva kwentengiso, ukunceda amashishini phumelela.
Isihloko sokuhlonipha ishishini lenzululwazi netekhnoloji
ISO9001, ISO14001, isatifikethi se-OHSAS18001
Isihloko sokuhlonipha ishishini letyala leAAA
SineLungelo lokushicilela eli-5 nangaphezulu kwamalungelo awodwa omenzi wechiza
Isiqinisekiso sethu kuzo zonke iimveliso: Iwaranti yonyaka omnye. Kwimeko apho kukho nakuphi na ukusilela ngexesha lomjikelo wobomi bemveliso, inkampani iya kuphendula kwiimfuno zenkonzo yomthengi ngaphakathi kweeyure ezingama-24, inike impendulo kwisithuba seeyure ezi-2, kwaye isombulule isisombululo ngaphakathi kweeyure eziyi-8.
Ukuyalela kunye noqeqesho: emva kokuba izixhobo zifikile kwindawo yomthengi, siya kulungiselela amagcisa ukuba agunyazise izixhobo kwindawo leyo ngexesha ekuvunyelwene ngalo ngawo omabini amaqela kunye nokuqeqesha abantu abafanelekileyo. Uqeqesho lwabasebenzisi lubandakanya imigaqo-nkqubo esisiseko yokusebenza kwezixhobo kunye nokuphathwa kweempazamo eziqhelekileyo, ukuze abaqhubi bakwazi ukusebenzisa izixhobo, ukugcinwa kunye nokusombulula iingxaki ngokuzimeleyo.
Emva kwexesha lewaranti, umthengisi anganikezela ngenkonzo yolondolozo lwexesha elide. Siza kuyenza kwangoko le nkonzo emva kokufumana isiqinisekiso somthengi seprojekthi kunye neendleko. Umthengi uya kuhlawula iindleko emva kokuqinisekisa isiqinisekiso senkonzo. Umgangatho wezabasebenzi wenkonzo yolondolozo kunye nexabiso lezinto zokugcina izinto kufuneka kuvunyelwene ngawo omabini amaqela ngesivumelwano sexesha elide.
Isatifikethi seshishini lenzululwazi kunye netekhnoloji
Isatifikethi setyala seAAA
Isatifikethi selungelo lokushicilela lesoftware
Isatifikethi semboleko seAAA
Ukusetyenziswa kweSatifikethi sePatent